QM oo ka walaacsan Xaaladda Muqdisho iyo rabshadaha bilowday | Allbalcad Online
Home WARARKA QM oo ka walaacsan Xaaladda Muqdisho iyo rabshadaha bilowday
QM oo ka walaacsan Xaaladda Muqdisho iyo rabshadaha bilowday
Qaramada Midoobey ayaa ku baaqday in si deg deg ah loo xoojiyo isku dhacyada ka socda Muqdisho ee saacaddihii lasoo dhaafay ka dib markii ishoristaag lagu sameeyay shacabka banaanbaxa ka dhigaayay Muqdisho ee kasoo horjeeday dowladdii waqtigeedu dhamaaday.
Waxa ay sidoo kale ku baaqday in la isku yimaado shir deg deg ah oo looga hadlaay xaaladda hadda taagan.
Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxa ay aad uga walaacsan tahay iska horimaadyadii hubeysnaa ee Muqdisho ka dhaca xalay iyo saakay oo jimco ah, waxa ayna ugu baaqeysaa deganaan iyo is xakameyn dhinacyada ay khuseyso, waxa ayna boorrineysaa in ay furnaato waddada wadahadalka si loo yareeyo xiisadaha.
Waxa ay muujinayaan isku dhacyada ka dhacay caasimadda sida loogu baahan yahay in degdeg loogu qabto kulan ay isugu yimaadaan Madaxda Dowlada Federaalka iyo kuwa Dowladaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka si ay heshiis siyaasadeed uga gaaraan hirgalinta qaabkii doorasho ee 17-kii Sebteembar.
Previous articleRa’iisul wasaare Rooble oo ka hadlay dagaalkii maanta iyo xalay ka dhacay Muqdisho
Next articleShirkii uu ku baaqay Farmaajo oo baaqday